Inona no tokony ho fantatrao raha mankany Shily ianao? | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | America, Shily
Imbetsaka, ny fanaovana sidina iraisam-pirenena dia mety ho tena izy odyssey ho an'ny mpandeha, satria miankina amin'ny firenena alehanao dia mangataka zavatra na hafa izy ireo. Raha amin'ity fahavaratra ity na tsy ho ela dia mikasa ny ho any Shily ianao, na hiala voly na hiasa, dia tsara ity lahatsoratra ity hampahafantatra anao ny zava-drehetra.
Inona no tokony ho fantatrao raha mankany Shily ianao? Eto izahay no milaza aminao.
1 Fanontaniana apetraky ny mpitsidika tsirairay ny tenany mialoha ny sidina mankany Silia
2 Toerana mahaliana manodidina an'i Shily
Fanontaniana apetraky ny mpitsidika tsirairay ny tenany mialoha ny sidina mankany Silia
Amin'ity tranga ity dia handeha ho any Silia isika… Inona ireo fanontaniana napetraka matetika?
Izaho dia tokony mandoa hetra na haba isan-karazany? Raha mitondra ny entanao mivezivezy na entana novidina teny amin'ny seranam-piaramanidina fotsiny ianao dia tsy mila mandoa karazana fomba amam-panao.
Inona no dinihina kitapo an'ny mpandeha? Ilay iray izay ampiarahina miaraka amin'ny mpandeha na hatramin'ny 120 andro aorian'ny nahatongavan'ilay dia. Raha izany no tranga farany, dia tsy maintsy mitondra ny fitahirizana entana sy ny antontan-taratasy fitaterana mifandraika amin'izany ny fitateranao.
¿Ohatrinona ny vidin'i Shily? I Silia no firenena lafo indrindra amin'ny Amerikana Latina saingy tsy misy tokony taitra ihany koa. Izy io dia indrindra amin'ny teboka stratejika izay avo kokoa ny filan'ny mpizahatany.
Inona no lafo indrindra sy mora indrindra any Chili? Ny lafo indrindra dia ireo toerana fizahan-tany izay mila fidirana handalovana ary koa fitateram-bahoaka, na dia misy aza ny safidy toy ny taxi iraisana izay somary lafo kokoa ny vidiny. Ny zavatra mora vidy indrindra dia ny sakafo, indrindra ny fivarotana an-dalambe amin'ny sakafo haingana: sakafo be dia be sy mora vidy izy io.
Inona ny volanao ary ohatrinona ny fanovana? Ny fanomezana ara-dalàna dia ny peso Shiliana. Amin'izao fotoana izao, ny euro iray dia mitovy amin'ny 755.06 pesos shiliana. Mba hanomezana hevitra anao, any Silia, ny sakafo mahazatra dia ny pie kesika (matetika dia lehibe io). Mitentina 620 Pile Shiliana izany, ka hitovy 0.82 euro izany.
Akanjo inona no asaina anaovana? Ao afovoan-firenena dia somary mafana ny toetrandro. Raha mankeny avaratra kokoa ianao dia mafana sy main-tany ka asaina mitafy akanjo maivana sy vaovao ary masoandro, molotra ary mpiaro volo. Tsy tokony hanadino zavatra mafana koa isika, satria na dia mafana aza ny andro, dia mangatsiaka mangatsiaka matetika ny alina. Azonao avela ao an-trano ny elo, mahalana ny orana.
Toerana mahaliana manodidina an'i Shily
Ivon-kolontsaina ao amin'ny lapa La Moneda.
Valan-javaboary roa taona.
Tranombakoky ny kanto kanto.
Làlana Paris / Londres.
Tranombakoky ny tantara nasionaly.
Fiangonan'ny Los Sakramenta.
Lohasaha feno lanezy.
Ny faritry El Golf.
Chapel an'ny renin'i Maria.
Tranombakoky ny zavakanto talohan'i Columbian.
Ny Tilikambo Entel.
Ivon-toerana Gabriela Mistral.
Tranombakoky ny kanto Visual.
Lohasahan'ny volana any San Pedro de Atacama.
Loharano mafana Puritama.
Ny geyser an'i Tatio.
The Chaxa Lagoon.
La Sebastiana (Tranon'i Pablo Neruda).
Rindrambaiko Reina Victoria.
Tranombakoka nasionaly an-dranomasina.
Tsangambato ho an'ireo maherifo.
Dia an-tongotra Yogoslavia.
Fiangonana loterana ny lakroa masina.
Ny British Arch.
Raha jerena voalohany dia toa tanàna maoderina sy maoderina i Santiago de Chile. Ny fananganana azy ireo dia noho ny horohoron-tany tsy tambo isaina izay iainan'izy ireo, saingy tanàna efa tranainy izy io ary tena mahaliana tokoa ny mahafantatra. Zava-misy mahaliana momba ny tanàna izay tsy tianay ny hitarika anao tampoka raha mandeha any ianao:
Tsy afaka misotro toaka amin'ny làlam-bahoaka, amin'ny toerana mihidy ihany.
Su superficie es fisaka tanteraka, Ka tsy ho olana aminao ny mandeha.
El zavokà Ny fahaizan'izy ireo hanina, ary any no ahafantaran'izy ireo azy io ho "dibera bibidia" noho ny atiny misy kaloria be.
Su Agua tap dia madio, mba hahafahanao misotro amin'izy ireo amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka.
Firenena iray hankafizana, indrindra ny hatsaran'ny tanàna malaza indrindra, Santiago de Chile.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Shily » Inona no tokony ho fantatrao raha mankany Shily ianao?